Ubuso obutsha boRhwebo lwe-E: Impembelelo yokuFunda koomatshini kuShishino | Martech Zone
Ngaba ukhe wacinga ukuba iikhompyuter ziyakwazi ukuqaphela kwaye zifunde iipateni ukuze zenze ezazo izigqibo? Ukuba impendulo yakho ibinguhayi, ukwisikhephe esifanayo neengcali ezininzi kushishino lwe-e-commerce; akukho mntu wayenokuxela kwangaphambili imeko ekuyo ngoku.
Nangona kunjalo, ukufundwa koomatshini kudlale indima ebalulekileyo kwi-e-commerce kule minyaka imbalwa idlulileyo. Makhe sijonge apho i-e-commerce ikhoyo ngoku kwaye njani ababoneleli ngenkonzo yokufunda koomatshini iya kuyibumba kwixesha elizayo elingekude kakhulu.
Yintoni etshintshayo kuShishino lwe-E-commerce?
Abanye banokukholelwa ukuba urhwebo lwe-e-commerce yinto entsha eye yatshintsha ngokusisiseko indlela esithenga ngayo, ngenxa yenkqubela phambili yetekhnoloji ebaleni. Akunjalo ngokupheleleyo, nangona kunjalo.
Nangona itekhnoloji idlala indima enkulu kwindlela esizibandakanya ngayo neevenkile namhlanje, i-e-commerce ibikho ngaphezulu kweminyaka engama-40 kwaye inkulu ngoku kunangaphambili.
Ukuthengiswa kwe-e-commerce kwihlabathi jikelele kufikelele kwi-4.28 yezigidigidi zeedola ngo-2020, kunye nengeniso ye-e-retail ekulindeleke ukuba ifikelele kwi-5.4 yezigidigidi zeedola ngo-2022.
Kodwa ukuba itekhnoloji ibisoloko ikhona, ukufunda koomatshini kulitshintsha njani ishishini ngoku? Ilula. Ubukrelekrele bokwenziwa buphelisa umfanekiso weenkqubo ezilula zokuhlalutya ukubonisa ukuba zinamandla kangakanani, kwaye zinoguqulo, zinokuba yinyaniso kangakanani na.
Kwiminyaka yangaphambili, ubukrelekrele bokwenziwa kunye nokufunda koomatshini bezingaphuhliswanga kakhulu kwaye zilula ekwenziweni kwazo ukuba zikhanye ngokwenyani ngokwezicelo zabo ezinokwenzeka. Noko ke, oko akusekho.
Iimveliso zinokusebenzisa iikhonsepthi ezinjengokukhangela ngelizwi ukukhuthaza iimveliso zabo phambi kwabathengi njengoko itekhnoloji efana nokufunda koomatshini kunye nee-chatbots zixhaphake kakhulu. I-AI inokunceda kwakhona ngoqikelelo lwe-inventri kunye nenkxaso ye-backend.
IiNjini zokuFunda ngoomatshini kunye neeNgcebiso
Zininzi izicelo eziphambili zobuchwephesha kwi-e-commerce. Kwinqanaba lehlabathi, iinjini zokucebisa zezinye zeendlela ezishushu. Unokuwuvavanya ngokucokisekileyo umsebenzi we-intanethi wamakhulu ezigidi zabantu abasebenzisa ii-algorithms zokufunda koomatshini kunye nokusetyenzwa kweedatha ezininzi ngokulula. Ungayisebenzisa ukuvelisa iingcebiso zemveliso kumthengi othile okanye iqela labathengi (i-auto-segmentation) ngokusekelwe kwizinto abazithandayo.
Ungafumanisa ukuba ngawaphi amaphepha amancinci asetyenziswa ngumxhasi ngokuvavanya idatha enkulu efunyenweyo kwitrafikhi yewebhusayithi yangoku. Uyakwazi ukubona into awayeyilandela nalapho wayechitha ixesha lakhe elininzi. Ngaphaya koko, iziphumo ziya kubonelelwa kwiphepha elenzelwe wena elinezinto ezicetyiswayo ezisekwe kwimithombo yolwazi emininzi: iprofayile yemisebenzi yangaphambili yabathengi, izinto anomdla kuzo (umzekelo, izinto azonwabisa ngazo), imozulu, indawo, kunye nedatha yemidiya yoluntu.
Ukufunda ngoomatshini kunye neeChatbots
Ngokuhlalutya idatha ecwangcisiweyo, ii-chatbots ezinikwe amandla kukufunda koomatshini zinokudala incoko "yomntu" ngakumbi nabasebenzisi. IiChatbots zinokucwangciswa ngolwazi oluqhelekileyo ukuphendula imibuzo yabathengi kusetyenziswa ukufunda ngoomatshini. Ngokusisiseko, abantu abaninzi i-bot inxibelelana nabo, kokukhona iya kuziqonda ngcono iimveliso / iinkonzo zesayithi ye-e-commerce. Ngokubuza imibuzo, ii-chatbots zinokunika iikhuphoni ezenzelwe wena, zityhile izinto ezinokwenzeka zokuthengisa, kwaye zijongane neemfuno zexesha elide zomthengi. Iindleko zokuyila, ukwakha, kunye nokudibanisa i-chatbot yesiko kwiwebhusayithi malunga ne-28,000 yeedola. Imali mboleko yeshishini elincinci inokusetyenziselwa ukuhlawula oku.
Ukufunda ngoomatshini kunye neziphumo zokukhangela
Abasebenzisi banokusebenzisa ukufunda koomatshini ukuze bafumane kanye oko bakukhangelayo ngokusekelwe kumbuzo wabo wokukhangela. Abathengi ngoku bafuna iimveliso kwisayithi ye-e-commerce besebenzisa amagama angundoqo, ngoko umnini wendawo kufuneka aqinisekise ukuba loo magama angundoqo anikezelwe kwiimveliso ezifunwa ngabasebenzisi.
Ukufunda ngoomatshini kunokunceda ngokujonga izithethantonye zamagama angundoqo asetyenziswa ngokuqhelekileyo, kunye namabinzana athelekisekayo abantu abawasebenzisa kumbuzo ofanayo. Amandla ale teknoloji ukufezekisa oku kubangelwa amandla ayo okuvavanya iwebhusayithi kunye nohlalutyo lwayo. Ngenxa yoko, iisayithi ze-e-commerce zinokubeka iimveliso eziphezulu phezulu kwephepha ngelixa zibeka phambili iireyithi zokucofa kunye nokuguqulwa kwangaphambili.
Namhlanje, izigebenga ziyathanda EBay bakubonile ukubaluleka koku. Ngezinto ezingaphezulu kwe-800 yezigidi ezibonisiweyo, inkampani iyakwazi ukuqikelela kwaye ibonelele ngezona ziphumo zophando zifanelekileyo isebenzisa ubukrelekrele bokwenziwa kunye nohlalutyo.
Ukufunda ngoomatshini kunye nokuJonga i-E-commerce
Ngokungafaniyo nevenkile ethengisa umzimba, apho unokuthetha nabathengi ukuze bafunde into abayifunayo okanye abayidingayo, iivenkile ezikwi-Intanethi zizaliswe zizixa ezikhulu zedatha yabathengi.
Nje ngeziphumo, ulwahlulo lwabaxumi ibaluleke kakhulu kushishino lwe-e-commerce, njengoko ivumela amashishini ukuba alungelelanise iindlela zawo zokunxibelelana kumthengi ngamnye. Ukufunda ngoomatshini kunokukunceda uqonde iimfuno zabathengi bakho kwaye ubabonelele ngamava okuthenga alungiselelwe ngakumbi.
Ukufunda ngoomatshini kunye namava oMthengi
Iinkampani ze-Ecommerce zinokusebenzisa ukufunda koomatshini ukubonelela ngamava omntu ngakumbi kubathengi bazo. Abathengi namhlanje abakhethi nje kuphela kodwa bafuna ukunxibelelana neempawu zabo abazithandayo ngendlela yobuqu. Abathengisi banokulungelelanisa unxibelelwano ngalunye kunye nabathengi babo besebenzisa ubukrelekrele bokwenziwa kunye nokufunda koomatshini, okukhokelela kumava angcono omthengi.
Ngapha koko, banokunqanda iingxaki zokhathalelo lwabathengi ukuba zenzeke ngokusebenzisa umatshini wokufunda. Ngokufunda koomatshini, amazinga okulahla iinqwelo ngokungathandabuzekiyo aya kuncipha kwaye ukuthengisa kuya kunyuka ekugqibeleni. I-bots yenkxaso yabathengi, ngokungafaniyo nabantu, inokuhambisa iimpendulo ezingakhethi cala nangaliphi na ixesha lemini okanye ebusuku.
Ukufunda ngoomatshini kunye nokufunyanwa kobuqhophololo
I-anomalies kulula ukuyibona xa unedatha eninzi. Ke, unokusebenzisa umatshini wokufunda ukubona iintsingiselo kwidatha, uqonde ukuba yintoni 'eqhelekileyo' kwaye yintoni engeyiyo, kwaye ufumane izilumkiso xa kukho into engalunganga.
'Ukubhaqwa kobuqhophololo' sesona sicelo sixhaphakileyo koku. Abathengi abathenga izixa ezikhulu zentengiso ngamakhadi okuthenga ngetyala abiweyo okanye abathi barhoxise iiodolo zabo emva kokuba izinto zizisiwe ziingxaki eziqhelekileyo kubathengisi. Apha kulapho ukufunda ngomatshini kungena khona.
Ukufunda ngoomatshini kunye neXabiso eliGunyazayo
Kwimeko yamaxabiso aguqukayo, ukufunda koomatshini kwi-e-commerce kunokuba luncedo kakhulu kwaye kunokukunceda uphucule ii-KPIs zakho. Ukukwazi kwe-algorithms ukufunda iipatheni ezintsha kwidatha ngumthombo wolu ncedo. Ngenxa yoko, ezo algorithms zihlala zifunda kwaye zibhaqa izicelo ezintsha kunye neendlela. Endaweni yokuthembela ekuthotyweni kwamaxabiso olula, amashishini e-e-commerce anokuzuza kwiimodeli eziqikelelwayo ezinokubanceda baqonde ixabiso elifanelekileyo lemveliso nganye. Unokukhetha olona nikezelo lulungileyo, amaxabiso angcono, kwaye ubonise izaphulelo zexesha lokwenyani, ngalo lonke ixesha ucinga esona sicwangciso silungileyo sokunyusa intengiso kunye nokulungelelaniswa kwe-inventri.
Iindlela zokufunda koomatshini kubumba ishishini le-e-commerce zininzi. Ukusetyenziswa kobu buchwepheshe kunempembelelo ngqo kwinkonzo yabathengi kunye nokukhula kweshishini kwishishini le-e-commerce. Inkampani yakho iya kuphucula inkonzo yabathengi, inkxaso yabathengi, ukusebenza kakuhle, kunye nemveliso, kunye nokwenza izigqibo ezingcono zeHR. I-algorithms yokufunda koomatshini kurhwebo lwe-e-commerce iya kuqhubeka ukuba yinkonzo ebalulekileyo kwishishini le-e-commerce njengoko livela.
Jonga uluhlu lweVendorland yeeNkampani zokuFunda ngoomatshini
tags: amaxabiso anamandlae-commerceeCommerceisincomo semveliso ye-ecommerceiziphumo zophendlo lwe-ecommerceIsahlulo se-ecommerceukufumanisa ubuqhetsebayokufunda umatshiniukufumanisa ubuqhophololo bokufunda koomatshiniulwahlulo lokufunda koomatshiniababoneleli ngenkonzo yokufunda koomatshiniiinjini zokucebisa imvelisoiziphumo zophendlo lwemvelisoisahlulo